Awoodda R & D - OUZHAN GANACSIGA (SHANGHAI) CO., LTD
Haddii aad rabto inaan soo saarno sheyga aad rabto, badanaa, waxaad u baahan tahay inaad na siiso sawirada 3D ama sawirada 2D ee alaabadaada. Laakiin haddii aadan haysan sawirro iyaga ka mid ah, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad noo soo dirto muunadda ama aad nala wadaagto fikradahaaga, waxaan ku sawiri karnaa sawirrada tusaalahaaga ama fikirkaaga.
Cabbiraadaha otomaatiga ah
Cabbiraadaha otomaatiga ah ee cabbiraadda (Haddii aad na siin karto shaybaarka): Ouzhan waxay leedahay qalab cabbiraad si otomaatig ah uga socda Japan, kaas oo si sax ah u cabbiri kara cabirka alaabta, ka dibna si toos ah u soo saari kara sawiro 3D ah.
Model Qaabaynta 3D: Injineerada Ouzhan sidoo kale waxay dhisi karaan moodooyinka 3D ee alaabooyinka ku saleysan fikradaha macaamiisha.
Dete Ogaanshaha Artifishalka: Sawir gacmeedyada hordhaca ah waxay u baahan yihiin in gacanta dib loogu eego, lagu xaqiijiyo laguna saxeexo ugu yaraan saddex injineero.
Sample samaynta: Waxaan sameyn doonaa shaybaar sida ku cad sawirada la xaqiijiyay.
Confirmation Sample xaqiijin: Waxaan u direynaa shaybaarka macaamilka si loo xaqiijiyo, ka dibna macmiilku wuxuu u baahan yahay inuu saxeexo xaqiijinta muunada.
Production Wax soosaarka ballaaran: Ka dib markii aan helno xaqiijinta muunadda ee uu saxeexay macaamilka oo aan horay u sii wadno, waxaan sameyn doonaa wax soo saar ballaaran.
Waxaan ka gudubnay imtixaanka ISO 9001: 2015, waxaanan leenahay nidaam maarayn tayo cod leh. Marka uma baahnid inaad ka walwasho tayada wax soo saarkeena, waxaan isku dayi doonaa inaan ku siino alaab iyo adeegyo tayo fiican leh.
Waxay ku gudubtay iyada oo loo marayo shahaadada qaranka ee aqoonta leh waxaana si wanaagsan loogu soo dhoweeyay warshadeenna ugu weyn. Kooxdayada khibrada leh ee injineernimada badanaa waxay diyaar u noqon doonaan inay kuugu adeegaan wadatashi iyo jawaab celin. Waxaan awoodnay inaan sidoo kale kugu soo qaadno shaybaarro lacag la'aan ah si aan ula kulanno waxyaabaha aad u baahan tahay. Dadaallada ugu habboon ayaa laga yaabaa in la soo saaro si ay kuu gaarsiiyaan adeegga iyo faa'iidooyinka ugu faa'iidada badan. Haddii aad runtii xiiseyneyso shirkadeena iyo xalalka, fadlan nala soo xiriir annaga oo noo soo diraya emayl ama si toos ah noo soo wac. Inaad karti u leedahay inaad ogaato xalalkeena iyo shirkadeena. Oo waxaad awoodi doontaa inaad timaado warshadeena si aad u aragto. Waxaan si joogto ah ugu soo dhaweyn doonnaa martida ka socota adduunka oo dhan shirkadeena.